Kedu ka esi eto nwatakịrị nwere ahụ ike ma nwee ọgụgụ isi?
Jụọ nne ma ọ bụ nna ihe ọ chọrọ ịhụ nwa ya, 99% ga-azakwa - nke mbụ, ahụike. N'ụzọ dị mwute, ugbu a, dị ka ọnụ ọgụgụ ahụike akọrọ, ọ bụ nanị pasent 20 nke ụmụaka ka a mụrụ mma, na pasent 80 nke ụmụaka na-arịa ọrịa mgbe ha na-amụ ma ọ bụ na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa. Ya mere olee otu esi etolite nwatakiri di ike ma nwee ọgụgụ isi? Anyị ga-agbalị ịghọta taa na isiokwu anyị.
Ole na ole na-eche na ntọala nke ahụike nwatakịrị etinyeghị ọbụna n'oge ime ime, ma n'oge gara aga, ma dabere n'otú ndị nne na nna ya n'ọdịnihu, ma nne ma nna si dị mma. N'ime oge nkwadebe maka afọ ime, ndị ọkachamara weere ya na ọkara otu afọ tupu oge a tụrụ ya anya, ndị nne na nna nwere ike ịnwa, dị ka o kwere mee, nyocha ahụike zuru oke, ma bụrụ nsogbu, kpochapụ ha ozugbo. Ịgbaghara bụkwa ịjụ ihe niile, na-enweghị ọdịiche, àgwà ọjọọ, dịka ịṅụ sịga na ịṅụ mmanya. Nri nke vitamin-mineral complexes dị ezigbo mkpa, ebe ọ na-emetụtakwa àgwà nke mkpụrụ ndụ nwoke na nwanyị.
Ime ime onwe ya bụ nke kachasi ike 40 izu, ebe ị maara, ịtọ na ịkpụzi akụkụ nke nwa ọhụrụ n'ọdịnihu. Na ebe a, karịa mgbe ọ bụla, ọ dabere na nne. Nri ya dị elu, ụzọ ndụ siri ike, ebe obibi dị jụụ nke ezinụlọ na-emetụta ahụike nke nwa ebu n'afọ a mụrụ.
Ọ bụrụ na nwata ahụ na-emekarị usoro nchedo na nke mmezi, mgbe ahụ na ebe obibi ọhụrụ, nwa amụrụ ọhụrụ ga-agbanwe ya n'ụzọ dị mfe, ma ọ bụghị na ọ ga-amalite ịrịa. Otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, n'oge a nwa ọhụrụ, ọ ghaghị ibu ụzọ hụ na ihe kwesịrị ekwesị kwesịrị ekwesị na nlekọta.
Ezigbo ihe oriri, nke na-elekọta ọdịdị onwe ya, n'ihi na nwa amụrụ ọhụrụ, n'ezie, mmiri ara ara. Dị ka Òtù Ahụ Ike Ụwa si kwuo, ịchọta ịmịnta na-ebelata ohere nke nsogbu dịka ọrịa, jaundice, hypoglycaemia (iweda ọkwa shuga na ọbara) na hypothermia (na-ebelata okpomọkụ ahụ).
Nlekọta kwesịrị ekwesị maka ụmụ amụrụ ọhụrụ pụtara, nke mbụ, na-enye nwa ahụ ebe dị mma ma na-edebe ọcha dị mkpa. Ọ dịghị ihe na - eme ka usoro ịghọ nkwụsị, dị ka mmeri oke, na - esite na ntanye na - ezighị ezi. E gosipụtara, na nwa ahụ na okpomọkụ bụ +22 ogo na iru mmiri dị 50-70%. Ịmalite imebiga ihe ókè, na-eme ka ịkwa ụda dị ọkụ, na-emeghe ọnụ ụzọ ámá ụdị ọrịa niile.
Usoro mmiri, ịdị mkpa dị ọcha, ma ọ bụghị nke a bụ ike ahụike kachasị mma ma nye ohere kachasị maka imebi nwa. N'aka nke ya, o na-enye aka n'inwe usoro nchịkwa.
E kwesịrị ichebara nlezianya anya n'èzí, nke, site n'ịzụlite agụụ nwatakịrị ahụ, na-eme ka akpa ume ya na akpụkpọ anụ ya, nke na-eme ka ụbụrụ na-eto eto na-amụba, dị oké mkpa nye nwa.
Nwa nwata, onye nwere nsogbu siri ike, na-eleta ụlọ akwụkwọ ọta akara n'emeghị nsogbu ọ bụla. Ahụ ya na-arịa ọrịa dịgasị iche, na-anọchite anya ya n'ebe niile. N'oge a, na mgbakwunye na nri na-edozi ahụ, na-aga n'ihu usoro nrụgide na ịga ije, nwa ahụ aghaghị inye nkasi obi na ụlọ na ụlọ akwụkwọ ọta akara. Ọ dị mkpa na nwata ahụ ga-eji ọṅụ na-aga ụlọ akwụkwọ ọta akara ahụ, ọ bụghị iji mmiri bea ákwá. Udo nke obi ya bụ nkwa nke ahụ ike anụ ahụ.
Nwatakịrị ahụ na-etolite, ọ ka mma usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Otú ọ dị, na ụlọ akwụkwọ, dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, ahụ ike nke ọtụtụ ụmụaka na-arịwanye njọ, enwere ọrịa ndị na-ejikarị ụdị ọrịa na-adịghị ala ala. Ndị ọkachamara kwenyere na isi ihe kpatara nsogbu ahụike na ụmụ akwụkwọ bụ enweghi nri kwesịrị ekwesị, enweghị ike ịrụ ọrụ nke oke uche. Otu nwa akwukwo nke oge a na-etinye oge ka ukwuu n'oge ya na oche ya ma ọ bụ kọmputa, nke na-eduga ná nnukwu nsogbu na nkwonkwo na ahụhụ, na nri na-ezighị ezi na-ebute ọrịa nke akụkụ eriri afọ. Ihe di elu nke ndi nkuzi na ndi nne na nna choro ka ndi di afo iri na abuo na-ebute umu ogwu di na nwata.
N'oge a, ọ dị mkpa ka ndị nne na nna kesaara nwatakịrị ahụ nsogbu ahụ, gbalịa ịchọta ihe edozi n'etiti ime uche na nke anụ ahụ, ma nwee ike ịbịakwute ya, ọnwụ nke nke a nwere ike iduga nhụjuanya dị njọ n'oge oge ndị na-eto eto.
Ya mere, na-ekwu maka ahụike nke nwa ọgbọ ọ bụla, anyị nwere ike ịchọpụta isi ihe anọ kacha emetụta ya: ahọrọ nri ziri ezi, ịkasi ike, mmega ahụ na nkasi obi ime mmụọ. Ọrụ nke ndị nne na nna chọrọ ịhụ nwa ha ahụike, nye ya ihe a niile.
Ịdị ọcha nke nwa agbọghọ na nwata
Anorexia nervosa na bulimia
Ihe ịgba ọgwụ mgbochi na-eme ụmụaka n'ime afọ isii
Ememe ndị dị n'ebe ndịda na nwatakịrị
Kedu esi kụziere nwatakịrị ka ọ taa ezé?
Ezigbo nne na nna - nwa ahụike
Ụzọ na usoro nke mmepe ncheta
Ememe ntụrụndụ maka ọkpụkpụ dịka usoro Pilates
Akara mgbatị - a na-emekarị ọmarịcha mara mma
Lioness na Gemini: Njikọ
Nri na Protein Food na Oriri Na - abawanye Ụba - Nkwenye Dietician
Nri ụmụaka kachasị mma
Osisi n'ime ụlọ bara uru
Ime nwata ka ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ ọta akara
Ntugharị na isi obodo nke France. Nkebi nke 1
Obere pizzas na zukini
Egwu dị iche iche na nwata
Njirimara bara uru nke mmanu sesame
Isi ndị ọzọ na oghere ntụrụndụ
Ezigbo ihe ịrịba ama na otu nwoke na-atụfu gị
Nwa agbọghọ chevalier Aliki Smehovoy kwadoro ya
Ezi ego nke ịhụnanya